ချဲလ်ဆီးနှင့် သူ၏ ချစ်သူများ: April 2008
Posted by ဆိုးသွမ်း at 3:51 AM No comments: Links to this post
Hi Chelsea's fans..,
Great New for us. We Chelsea ROCK & beautifully BEAT to Man Utd today. Not far away to win the Premier League. Come on, Chelsea!!
Please takealook at the pictures from The Sun Newspaper. Enjoy...,
Chelsea’s Soloman Kalou and Man United’s Mikel Silvestre and Rio Ferdinand
Man United’s Nani and Ashley Cole of Chelsea
Michael Ballack heads Chelsea in front
Wayne Rooney scores Man United’s equaliser
Michael Ballack scores from the spot for Chelsea
Posted by Soe Mya Nandar Thet Lwin (Borros Roxo) at 2:12 AM 1 comment: Links to this post
Oh !!! Really Great Scoccer
တကယ့်ကို တကယ့်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မိုက်ကယ်ဘောလက်ရေ ။ ဒီနေရာကနေ အထူးကျေးဇူးတင်စွာနဲ့ ချဲလ်ဆီး ချစ်သူတွေကို ကိုယ်စား ခင်ဗျားကို ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ချဲလ်ဆီးအတွက် အခုလို အဖိုးတန်ဂိုးတွေ သွင်းပေးတဲ့ အတွက်ရော ၊ စိတ်ဓတ်ရှိစွာနဲ့ ချဲလ်ဆီးအပေါ် ကြိုးစားပေးခဲ့တဲ့ အတွက်ပါ နှစ်သက်အားရ မိပါတယ်။
လီဗာပူးလ်နဲ့ ပွဲမှာ ကစားမှုညံခဲ့သော ဒရော့ဘာက ဒီနေ့ပွဲမှာ အားထည့်ကစားသွားတဲ့ အပြင် ဂိုးရရှိအောင်ပါ ဖန်တီးပေးနိင်ခဲ့တာကြောင့် ကျေးဇူးပါ။ နောက်တစ်ယောက်က အက်ရ်ှလေကိုး ။ ဟန်ဆောင်ကစားသမား ဒိုလေးကို တစ်ချိန်လုံး ထိန်းချုပ်ထားနိင်ခဲ့တာရယ် ချဲလ်ဆီးအတွက် ဂိုးကာကွယ်ပေးနိင်မှု့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ချဲလ်ဆီး တိုက်စစ်မှုး ဘိုရှက်ပါ။ သူကလည်း ၀င်လာတဲ့ အချိန် ၁၂ မိနစ် ကျော်ကျော်လေးမှာပဲ ချဲလ်ဆီးအတွက် ဂိုးမရရှိအောင် ကာကွယ်ပေးသွားတာကြောင့် ကျေးဇူးပါ။ နောက်ပြီးတော့ ချဲလ်ဆီး တစ်သင်းလုံးပေ့ါ။ ကာဗယ်လ်ဟိုကိုလည်း အပြစ်မတင်ရက်ပါဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဒီနေ့ပွဲ နိင်တဲ့အပြင် ကျန်တဲ့ပွဲတွေမှာလည်း သူပဲ အကောင်းဆုံး ကစားပြနေတာ မဟုတ်လား။ ၀ူး.....အရမ်းပျော်တယ်ဗျာ။ ဖလားမရရင် နေပါစေ ။ မန်ယူကို နိင်ရင် ကျေနပ်တယ်။ ပျော်တယ်ပေ့ါဗျာ။ ကဲ...ကဲ မကြည့်လိုက်ရသေးတဲ့ သူတွေအတွက် ကျွန်တော် ဟိုက်လိုက်လေးတွေ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ....ချဲလ်ဆီးချစ်သူတွေ။
Chelsea2: 1 Mu
1 st Goal by Michael Ballack
2nd Goal by Rooney
3rd Goal again by Michael Ballack
1st Hight Light
2nd Hight Light
Posted by ဆိုးသွမ်း at 12:26 AM No comments: Links to this post
အလယ်တန်း - ဘောလက် ၊ အက်ဆီယန် ၊ အကာလူး ၊ ဂျိုကိုးလ် ၊ မီခေးလ်
နောက်တန်း - ဖာရဲရား ၊ တယ်ရီ ၊ ကာဗယ်လ်ဟို ၊ အက်ရ်ှလေကိုး
ခန့်မှန်း - ၁းဝ ၊ ၂းဝ ၊ ၂း၁
သရဲနီ ခြေင်္သေ့ကုတ်ခံရမဲ့ အဖြစ်ကို မိန့်မိန့်ကြီး ကွန်ပျူတာ အရှေ့ကနေ ထိုင်ကြည့်နေလိုက်ဦးမယ်ဗျာ။ လမ်းပတ်အတွက် ချဲလ်ဆီး ကစားသမားတွေ အောင်ပွဲကို ယူဆောင်ပေးကြမှာပါ။ အောင်မြင်ပါစေ ချဲလ်ဆီး ချစ်သူတွေ....
Posted by ဆိုးသွမ်း at 5:15 PM 1 comment: Links to this post
ကျွန်တော်တို့၏ အဓိက ကွင်းလယ်လူ အင်္ဂလန်လက်ရွေးစဉ် ၂၈ နှစ်သား ချဲလ်ဆီးကစားသမား Frank Lampard ၏ အမေ ဒီနေ့ တွင် ကွယ်လွန်ကြောင်း မြန်မာဂိုးဝက်ဖ်ဆိုက်ဒ်တွင် ဖတ်ရှု့ရ၍ မိသားစုနဲ့ အတူ ၀မ်းနည်းပါကြောင်း ချဲလ်ဆီးချစ်သော ဘလော့ဂ်ဂါ မောင်နှမ များမှ ဤနေရာမှ နေ၍ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ကိုလမ်းပတ် အမေရေ အမျှ...အမျှ...အမျှ ကောင်းရာ သုဂတိလားပါစေဗျာ။ သေခြင်းတရားဆိုတာ ဘုရားတောင် ရှောင်လို့ လွတ်တာမှ မဟုတ်လား။ တရားနဲ့ ဖြေနိင်ပါစေ။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 5:42 PM3comments: Links to this post
I'd like to shareafew pictures from British Newspaper today(23/04) . The big photos from last night's clash at Anfield. Hope you all enjoy it. Pictures as follow:
Fernando Torres tussles with John Terry. Seen it's hard to play.
Liverpool 1-1 Chelsea: Dirk Kuyt scores for the Reds shortly before half-time. Pressure for Chelsea at that time.
It's the 95 minutes and John Arne Riise heads into his own net. Hooray!!
Luck is on our Chelsea side.
Riise's OG gives Chelsea crucial away goal. Poor Liverpool, Bad luck!
Frank Lampard celebrates Chelsea's goal at Liverpool goalie Pepe Reina holds his head in his hands
Here is from The Sun Newspaper for Slideshow.
All the best of luck CHELSEA!!! :-)
Posted by Soe Mya Nandar Thet Lwin (Borros Roxo) at 1:08 AM 1 comment: Links to this post
၂၆ နှစ်သား လက်စွမ်းထက်ဆဲ ပီတာဆက်ခ်ျ
စိတ်ဓတ်ရှိလွန်းလို့ ပွဲနှင့်လွဲခဲ့ရသော်လည်း အိမ်ကွင်းမှာ ခြေစွမ်းပြမဲ့ မိုက်ကယ်အက်ဆီယန်
မနေ့က လီဗာပူးလ်ကို အဝေးကွင်းမှာ ရစ်စီရဲ့ သူများဂိုးမသွင်းနိင်လို့ ကိုယ့်ဂိုးကို ခေါင်းစွမ်းပြ သွင်းမှုကြောင့် အဖိုးတန် ၁ ဂိုးရခဲ့၍ သရေကျခဲ့ပြီး ၊ နောက်လာမဲ့ အိမ်ကွင်းမှာတော့ တံတားပေါ်က ကြိုးကြာကို အေးဆေးကန် ချနိင်အောင် ကြိုးစားကြပါစို့။ ဒရော့ဘာ ၊ အက်ဂ်ှလေးကိုး တို့ကို ဒီဘလော့ဂ်ကနေ ပြင်းထန်စွာ ပြစ်တင်ရှုံချလိုက် ပါတယ်။ အက်ဆီယန်လေးက လောလောဆယ် ခြေစွမ်းပြနေပေမယ့် ၂ ပွဲဆက် အ၀ါကြောင့် ၀င်ကန်ခွင့် မရခဲ့တာကြောင့် လီဗာပူးလ်တို့ သက်သာခဲ့ရတာပါ။ နောက်ဆုံးတော့လည်း ဇာတာပဲ ပြောပြော ချဲလ်ဆီးက အဖိုးတန် အဝေးကွင်း ( ၁ ) ဂိုးနဲ့ အိမ်အပြန် မျက်နှာပန်း လှခဲ့ပါပြီ။ အောက်မှာ ချဲလ်ဆီးရဲ့ မနေ့က ပွဲစဉ်နဲ့ ဂိုးလေးတွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မကြည့်ရသေးလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ကြည့်ပြီးလို့ ပြန်ကြည့်ချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒေါင်းလုပ်ဆွဲသွားနိင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာထဲ စာတောင် သိပ်မရှိဘူး။ ချဲလ်ဆီး ဘောလုံးပွဲ ဗီဒီယို တွေချည်းပြည့်နေလို့ ဟက်ဒစ် အသစ်ဝယ်ရတော့မယ်ဗျာ။ အဟဲဟဲ။
1st- Half Hight Light
2nd-Second Hight Light
First Goal by Kuyt
Own Goal by Risse
Posted by ဆိုးသွမ်း at 10:41 PM No comments: Links to this post
မော်ရင်ဟို လက်ထက်မှာ မဆပ်နိင်ခဲ့တဲ့ ရှုံးကြွေးကို ပြန်ဆပ်မဲ့ ဂရန့်ကြီးကတော့ နိင်ပွဲရရှိအောင် ချဲလ်ဆီးကစား သမားများနှင့် ဘယ်လိုဘယ်ပုံ ပြန်ဆပ်မယ်ဆိုတာကို
Posted by ဆိုးသွမ်း at 12:58 AM No comments: Links to this post
အလယ်တန်း - လမ်းပတ် ၊ ဘောလက် ၊ ဂျိုကိုးလ် ၊ မက်ခေလီလီ ၊ အကာလူး
နောက်တန်း - အက်ရ်ှလေကိုး ၊ တယ်ရီ ၊ ကာဗယ်လ်ဟို ၊ ဖာရဲရား
ခန့်မှန်း - ၀း၁ ၊ ၁း၁
ဒီပွဲမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဓိက ကွင်းလယ်လူ လမ်းပတ်ပြန်ပါလာပေမယ့် အဖျက်ကစားသမား ဖြစ်တဲ့ အက်ဆီယန်က ၂ ပွဲဆက်တိုက် အ၀ါနဲ့ ပွဲပယ်ခံထားရပါတယ်။ အဖျက်ကစားသမား ပီသတာပေ့ါဗျာ။ ကဲ...မော်ရင်ဟို မဆပ်နိင်သေးတဲ့ ရှုံးကြွေးကို ဂရန့်က တာဝန်ယူမယ်တဲ့ ချဲလ်ဆီးချစ်သူတို့ရေ။ အောင်ပွဲကို ကြိုလင့်ကြပါစို့ဗျာ။
ကဲ...ကာလအတန်ကြာ ကျွန်တော်မပြောဘဲ ထားခဲ့တဲ့ အွန်လိုင်းဂိမ်း တစ်ခုလေးအကြောင်းကို တောင်းပန်စွာ ပြောကြားအပ်ပါတယ်။ ဒီဂိမ်းလေးက ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ရှိတဲ့အသင်းတွေထဲမှာ ရှိတဲ့ ဘောလုံးသမားတွေနဲ့ ကန်ရတာပါ။ ဘယ်လိုကန်ရတာလဲဆိုတော့ ဂိမ်းထဲမှာ အကောင့်ဖောက်လိုက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ ကစားသူကို ၀က်ဘ်ဆိုက်ဒ်က ပေါင် ၁၀၀ ပေးပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီငွေတွေထဲက ဂိုးသမား ( ၂ )ယောက် ၊ နောက်တန်း ( ၅ ) ယောက် ၊ အလယ်တန်း ( ၅ ) ယောက် ၊ ရှေ့တန်း ( ၃ ) ယောက် ၊ အားလုံးပေါင်း ( ၁၅ ) ယောက်ကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ကစားသမား အလိုက် ပေးထားတဲ့ ပေါင် ၁၀၀ နဲ့ ရအောင်ဝယ်ရပါတယ်။ ၀ယ်တယ်ဆိုပေမယ့် ကစားသမား အလိုက် တန်ဖိုးဈေးရှိပါတယ်။
ဒါလေးကတော့ အမှတ်အများဆုံးပြိုင်တဲ့ ပုံစံလေးပါ။
ကဲ ကြိုဆိုနေမယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်း ၂ ယောက်ပြိုင်နေတဲ့ ပွဲစဉ်အတွင်းကို လာဖို့လည်း ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ လာမယ်ဆိုရင်တော့ မေးလ်လေး ချန်ခဲ့ပါ။ ကျွန်တော် ချဲလ်ဆီးချစ်သူတို့ရဲ့ မေးလ်ရတဲ့ အခါ invite လုပ်လိုက်ပါ့မယ်။ အဲဒီအခါ ဖန်တွေရဲ့ မေးလ်ထဲမှာ ကုဒ်နံပတ်လေး ပြန်ပါလာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ ကုဒ်နံပတ်လေးကို စီဘောက်စ်မှာ ပြန်ထားပေးခဲ့ပါ။ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အတူတူ ပြိုင်နေကြပြီပေ့ါဗျာ။ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ချဲလ်ဆီး ချစ်သူတွေရေ။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 7:14 PM2comments: Links to this post
ကဲ....အပြာရောင် ချစ်သူတွေရေ ဒီနေ့ မနက် ကြားလိုက်ရတဲ့ သတင်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ချဲလ်ဆီးရဲ့ အဓိကွင်းလယ် ကစားသမားဖြစ်တဲ့ ကိုလမ်းပတ်ရဲ့ အမေဟာ နမိုးနီးယား ရောဂါကနေ ပုံမှန်အခြေအနေ ပြန်ဖြစ်လာတာကြောင့် မနက်ဖြန် လီပါပူးလ်နဲ့ ပွဲမှာ ကိုလမ်းပတ်ကို ပြန်လည်မြင်တွေ့ရတော့မယ်လို့ သတင်းကြားလာခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ထပ် ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ ဒရော့ဘာနဲ့မိုက်ကယ်ဘောလက် တို့ကတော့ မသေချာသေးပါဘူးတဲ့။ ထိုသူနှစ်ယောက်မပါတာ တကယ့်နစ်နာမှုကြီး ဖြစ်နေပေမယ့် လမ်းပတ်ပြန်ပါလာနိင်တာရော ၊ တိုက်စစ်မှာ ရှက်ရ်ှချင်ကို ကိုပါ ထည့်သုံးမယ် ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ အတွက် တိုက်စစ်က တော်တော်လေးကို ထိရောက်မှ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အနယ်လ်ကာနဲ့ ဘိုရှက်ရ်ှကို တွဲသုံးလိုက်ရင် လီပါပူးလ် နောက်တန်းတွေကို ကောင်းကောင်း ဒုက္ခပေးနိင်မှာပါ။ ကဲ အပြာရောင် ချစ်သူတွေရေ.....အောင်ပွဲကို ကြိုလင့်ကြပါစို့။ Chelsea....Chelsea.....Chelsea
Posted by ဆိုးသွမ်း at 4:58 PM No comments: Links to this post
မနေ့ညက ချဲလ်ဆီး ၀က်ဘ်ဆိုက်ဒ်ထဲ လျှောက်ကြည့်ရင်းနဲ့ တောင်နှိပ်မြှောက်နှိပ် လျှောက်နှိပ်တာ ဒီလင်ခ့် လေးကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ အကောင့်တောင်းတဲ့ အပြင် ၀င်းဒိုးမီဒီယာကိုပါ အဆင့်အတန်းမြင့်ပါ ဆိုလို့ နှိပ်ကြည့်လိုက်တော့ နောက်ဆုံးမှာ ခရက်ဒစ်ကဒ်ပါ တောင်းလာတာကြောင့် လုပ်ထားတာလေး ကောက်ထည့်လိုက်တော့ ချဲလ်ဆီးပွဲတွေကို ဒေါင်းလုပ်ချဖို့ ပေးထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဘာမှတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ ချဲလ်ဆီးကန်ပြီးသား ပွဲတွေ မကြည့်ရရင် ဒေါင်းလုပ်ချပြီး ကြည့်လို့ရတယ်ပေ့ါ။ ဒါပေမယ့် ခရက်ဒစ်ကက်တော့ လိုတယ်ပေ့ါဗျာ။ ချဲလ်ဆီးချစ်သူတွေလည်း ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် အကောင့်လုပ်ပြီး သွားရောက်ဒေါင်းလုပ် ချလို့ ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေး သတင်းကောင်းပါအပ်ပါသည်။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 3:44 PM No comments: Links to this post
ချဲလ်ဆီးချစ်သူ ဖြစ်သော မစိုးမြနန္ဒာသက်လွင် ၏ ဧပရယ် (၁၉) ရက်နေ့မှာ ကျရောက်သော (၂၃) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှသည် နောက်နှစ် ပေါင်းများစွာ မိသားစုနှင့်အတူ စိတ်ကျန်းမာခြင်း ၊ ကိုယ်၏ ချမ်းသာခြင်းတို့နှင့်အတူ ဘ၀ကို ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့စွာ ဖြက်သန်းနိင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်း၍ ကျွန်တော်တို့ အပြာရောင် ချစ်သူများ ဖြစ်တဲ့ -
ကိုစိုးထက်၊ ကိုကလိုစေးထူး၊ ကိုဆိုးသွမ်း၊ ကိုကိုဖရီး၊ ကိုဘလာဂေါက်၊ ကိုဝင်းဇော်၊ ကိုဒီရေ၊ ကို99၊ ကိုStanley၊ ကိုHeartmuseum၊ ကိုKnowledgevilla၊ မလားရှိုးသူ၊ မမေ၊ မမိုးချစ်သူ၊ မသိုးမလေး ...
မွေးနေ့ လက်ဆောင် ကဗျာ ...
မွေးနေ့ရှင် စိုးမြနန္ဒာသက်လွင် အတွက် “အားမာန်”
သန်မာသည့်အား ၊ စွမ်းပကားဖြင့်
Posted by စိုးထက် - Soe Htet ! at 12:12 PM4comments: Links to this post
Labels: Fan, Fun, တိုတိုထွာထွာ
ချဲလ်ဆီးချစ်သူဖြစ်သော မစိုးမြနန္ဒာသက်လွင်၏ ဧပရယ် ( ၁၉ ) ရက်နေ့မှာ ကျရောက်သော ( ၂၃ ) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှသည် နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာ မိသားစုနှင့်အတူ စိတ်ကျန်းမာခြင်း ၊ ကိုယ်၏ ချမ်းသာခြင်းတို့နှင့်အတူ ဘ၀ကို ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့စွာ ဖြက်သန်းနိင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်း၍ ကျွန်တော်တို့ အပြာရောင် ချစ်သူများဖြစ်တဲ့ -
ကိုစိုးထက် ၊ ကိုကလိုစေးထူး ၊ ကိုဆိုးသွမ်း ၊ ကိုကိုဖရီး ၊ ကိုဘလာဂေါက် ၊ ကိုဝင်းဇော် ၊ ကိုဒီရေ ၊ ကို99 ၊ ကိုstanley ၊ ကိုheartmuseum ၊ ကိုknowledgevilla ၊ မလားရှိုးသူ ၊ မမေ ၊ မမိုးချစ်သူ ၊ မသိုးမလေး
တို့မှ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ အသက်ရာကျော် ရှည်ကြောင်း မေတ္တောပို့သအပ်ပါသည်။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 6:44 AM 1 comment: Links to this post
မနေ့က အဲဗာတန်ကို အသေအလဲ ကန်ရမယ် မှတ်တာ။ သူတို့က ချန်ပီယံလိဂ် ၀င်ခွင့်ရအောင် ကြိုးစားမှာ ဆိုတော့ ချဲလ်ဆီးတော့ ပွဲကျပ်ပြီ ဆိုပြီး ဆုတောင်းလိုက်ရတာ။ ဆုတောင်းရင် လွဲတယ် ဆိုတဲ့ အတိုင်းပဲ အဲဗာတန်က ကန်သွားတာ အေးရာ အေးကြောင်း မုန့်စိမ်းပေါင်း လုပ်သွားတယ်။ သာဓု သာဓု သာဓု ။ ၀ူး...တော်သေးတယ်ဗျာ။ အက်ဆီယန် ဂိုးနဲ့ ကပ်နိင်သွားလို့။ အဲဗာတန်က အာတီတာ ၊ ကာဟေးလ် တို့မပါတာ တော်တော် သက်သာသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်စ်ကော့ကတော့ တော်တော် ကောင်းတယ်။ ချဲလ်ဆီးက ၀ယ်သင့်တယ်။ အဲဒီကောင်ကို။ ကဲ မကြည့်လိုက်ရတဲ့ သူတွေ အတွက် ဟိုက်လိုက်လေး တင်ပေးလိုက်တယ်ဗျာ။ ကြည့်ရှု့တော်မှုကြပါဗျို့....ဒူဝေေ၀ဝေ။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 7:45 PM No comments: Links to this post
အလယ်တန်း - ဂျိုလ်ကိုး ၊ ဘောလက် ၊ အက်ဆီယန် ၊ အကာလူး ၊ မီခေးလ်
နောက်တန်း - အက်ဂ်ှလေကိုး ၊ ကာဗယ်လ်ဟို ၊ တယ်ရီ ၊ ဘလက်တီ
ခန့်မှန်း - ၁း၂
ဒီနေ့ပွဲက တော်တော်လေးကို သတိထားကန်ရမယ့် ပွဲစဉ်ပါ။ အဲဗာတန်က အပေါ်က လီဗာပူးလ်နဲ့ ၃ မှတ်သာ ကွာသောကြောင့် ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့် ရရှိရန် အထူးကြိုးစား ကစားပါလိမ့်မယ်။ အိမ်ကွင်းဖြစ်တာရယ် ချဲလ်ဆီးကို အကယ်၍သာ ရှုံးသွားခဲ့ရင် လီဗာနဲ့ ၆ မှတ် ကွာသွားနိင်တာကြောင့် ဒီပွဲကို အနည်းဆုံး သရေတော့ ရအောင် ခံကန်မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ အပြာတွေကလည်း မန်ယူနဲ့ ၅ မှတ်ကွာနေပေမယ့် ဖလားရဖို့က နီးစပ် နေသေးတော့ အားထည့်ကန်ရမှာပါပဲ။ ကဲ....စောင်မျှော်ကြည့်ရှု့ ကြပါစို့။ အပြာရောင် ချစ်သူတွေရေ။ အားလုံး နှစ်သစ်မှာ စိတ်အသစ် နဲ့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူး ကျန်းမာ ချမ်းသာ ကြပါစေ။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 5:50 PM 1 comment: Links to this post
ကဲ ချယ်လ်ဆီး ချစ်သူတွေ အတွက် အမှတ်တရ လက်ဆောင်တွေ မ၀ယ်ပေးနိင်ပေမယ့် ပုံလေးကြည့်ပြီး စိတ်ကြည်နူးမှုရအောင် ရှာဖွေ မွှေနောက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အမှတ်တရ သိမ်းထားကြပါစို့။ နောက်ဆိုရင် ဘောလုံးသမား တစ်ပုံချင်းစီရဲ့ wallpaper တွေပါတင်ပေးပါမယ်။ အခုတော့ ဒါလေးတွေပဲ ကြည့်ရှု့ယူဆောင်သွား ကြပါစို့။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 11:42 PM 1 comment: Links to this post